ဘဝ Archives - YOYARLAY Digital Media and News
Clean Yangon နှင့် Enervon-C တို့ ပူးပေါင်းပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရည်ရွယ်ချက် ၁. စွန့်ပစ်အမှိုက်ကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုများအား သတိပြုဆင်ခြင်နိုင်စေရန် ၂. စည်းကမ်းမဲ့အမှိုက်စွန့်ပစ်မှုများ လျော့နည်းပပျောက်စေရန် ၃. နိုင်ငံတဝှမ်း သန့်ရှင်းသာယာလှပလာစေရန် ၄. လူသားတိုင်း ကျန်းမာပျော်ရွှင်သောဘဝကို…
(၁) ‘တန်ဖိုး’ဆိုတဲ့စကားကို ပစ္စည်းတစ်ခု၊ အရာဝတ္ထုတစ်ခုရဖို့အတွက် ကိုယ့်ဘက်ကပေးလိုက်ရတဲ့ သတ်မှတ်ချက်ဈေးနှုန်းတစ်ခုအဖြစ် နားလည်ကြတယ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဈေးဖြတ်လို့မရနိုင်တဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရည်အသွေးတစ်ခုအနေနဲ့လည်း နားလည်၊ လက်ခံတတ်ကြတယ်။ ‘တန်ဖိုး’နဲ့ပတ်သက်လို့ တန်ဖိုးထား၊ တန်ဖိုးသိ၊ တန်ဖိုးရှိ၊ တန်ဖိုးဖြတ်၊ တန်ဖိုးမဲ့ . . .စတဲ့အသံတွေ…
Published: May 28, 20203:45 pm
ဘဝမှာ ရှင်သန်နေမှုဟာ အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုပါ
(၁) ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဘုရားက ‘မနုဿ ဘာဝေါ ဒုလ္လဘော’၊ ‘လူအဖြစ်ဟာ ရခဲတယ်’လို့ ဟောကြားခဲ့ပေမဲ့ ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာတော့ လူကြီး၊ လူငယ်အရွယ်စုံတချို့ ရခဲလှတဲ့ ကိုယ့်ဘဝကို တန်ဖိုးထား ခင်တွယ် မှုမရှိဘဲ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ အရှုံး ပေးအညံ့ခံနေကြတာတွေလည်း…
Published: February 2, 202012:09 pm
စိတ်ကျန်းမာရေးကို လူတော်တော်များများက မေ့လျော့ထားတတ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မြင်ရတဲ့အရာထက် မမြင်ရတဲ့ စိတ်ကို လူတွေက သိပ်ပြီး ဂရုစိုက်လေ့မရှိတာကြောင့်ပါပဲ။ “စိတ်ချမ်းသာမှ ကိုယ်ကျန်းမာ” ဆိုသလို စိတ်ကို အေးချမ်းစွာ နေထိုင်တတ်မှ ဘဝကို ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာနဲ့ ဖြတ်ကျော်သွားနိုင်မှာပါ။ စိတ်ချမ်းသာဖို့ဆိုတာ…
Published: May 29, 20193:26 pm
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝမှာ အေးချမ်းမှု၊ ပျော်ရွှင်မှု၊ လုံခြုံမှု အလုံးစုံရရှိဖို့ အရေးကြီးဆုံးအရာတွေထဲမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားတတ်ခြင်းဟာလည်း တစ်ခုအပါအဝင်ပါပဲ။ ကိုယ်တိုင်က ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားတတ်မှ တခြားသူကပါ ကိုယ့်အပေါ် မေတ္တာထားနိုင်မှာပါ။ မိမိကိုယ်ကို တန်ဖိုးမထားတတ်တဲ့သူတွေဟာ စိတ်မလုံခြုံမှုတွေ ဖြစ်စေပြီး…
Published: May 28, 201910:28 am
သာယာတဲ့ညနေခင်းလေးတစ်ခုမှာ မြေးအဘိုးနှစ်ယောက်ဟာ စကားလက်ဆုံကျရင်း မြေးဖြစ်သူကို လိမ္မာရေးခြားရှိအောင်ဆုံးမလို့နေပါတယ်။ အဘိုးဖြစ်တဲ့သူက “အဘိုး အမေရိကန်ကိုသွားလည်ခဲ့တုန်းက အဖြစ်ပျက်လေးတစ်ခု ငါ့မြေးကိုပြောပြမယ်။ အဲဒီချိန်တုန်းက အဘိုးအသက်က (၂၅) လောက်ပဲရှိအုံးမယ်။ မြို့ထဲကိုလည်ပတ်ရင်း ဗိုက်ဆာတာနဲ့ လူရှင်းမယ်ထင်တဲ့ ကော်ဖီဆိုင်လေးတစ်ခုကို ဝင်သွားခဲ့တယ်။ ဆိုင်ထဲရောက်တဲ့အခါ…
Published: May 17, 20192:39 pm